Prometheus In The New Age: မြန်မာနိုင်ငံရေးမျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့သူ (သို့) အာဇာနည် အရှင်ဦးဥတ္တမ
မြန်မာနိုင်ငံရေးမျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့သူ (သို့) အာဇာနည် အရှင်ဦးဥတ္တမ
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးအား နယ်ချဲ့၏ စစ်လက်နက် အင်အားအောက်တွင် ရဲရဲဝင့်ဝင့် အမြော်အမြင်ကြီးစွာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပြီး နိုင်ငံရေးမျက်စိကို ဖွင့်ပေးခဲ့သူမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်ကိုအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထိုနေ့ကို ဦးဥတ္တမ နေ့အဖြစ် နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့သည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကို ၁၈၇၉၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ရူပရပ် အဖဦးမြ၊ အမိ ဒေါ်အောင်ကျော်သူ တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘများက ရှင်သာာမဏေ၀တ်ပေးသဖြင့် ရှင်ဥတ္တမ ဟုတွင်သည်။ နက်နဲသော ပိဋ္ဋကတ်စာပေကို ပခုက္ကူမြို့ရေစကြိုတိုက်တွင်လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့တွင်လည်းကောင်း ဆည်းပူးလေ့လာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှိခိုက် အမျိုးသားကောလိပ်တစ်ခု တွင် ပါဠိနှင့် ဗုဒဘာသာစာပေဆိုင်ရာ ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယတွင် ဟိန္ဒူမဟာဆပ်ဗာ အသင်းကြီး၏ ဥက္ကဠအဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၈ နှစ်ကြာမျှနေခဲ့ပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ပညာသင်သွားလေသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် သင်ကြားနေစဉ်ရုရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲ (၁၉၀၄-၀၅) တွင် ဂျပန်က၎င်း၏ အင်အားကြီးမားသော ပြိုင်ဘက်ရုရှားကို အနိုင်ရလိုက်သည်ကို တွေ့ရပြီး အာရှတိုက်သား ဂျပန်ကို အထင်ကြီးသွားခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဂျပန်စစ်နိုင်သည်ကို နိုင်ငံရေးမျက်စိဖြင့် ကြည့်တတ်သော ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် မြန်မာအမျိုးသားလုံးအားလုံး နိုင်ငံရေး မျက်စိဖွင့်ပေးရန် ဆန္ဒပြင်းပြနေခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က အာရှသားတို့အတွက် ဂျပန်သည် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်ဟု ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက ယုံကြည် သည်နှင့် အညီ ၁၉၀၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ဂျပန်တွင် ၂ နှစ်ကြာ ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉၀၉ တွင် ဂျပန်တွင် တရုတ်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသော ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်က ဆရာတော်ကို လေးစားခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်သို့ သူနှင့်အတူလိုက်ခဲ့ရန် ပင့်ခဲ့၍ တရုတ်ပြည်သို့ လေ့လာရေးသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက ဦးဥတ္တမသည် အာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အရေးပါမှုကို လေ့လာသိရှိ သတိပြုနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၀၆ မေလတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ၀ိုင်အမ်ဘီအေ ခေါ် ဗုဒ္ဒကလျာဏယုဝအသင်း၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်အဟုန်ရရန် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက ၀င်ရောက်အားပေးကူညီခဲ့သည်ထိုစဉ်အခါက သူရိယသတင်းစာမှာ ဆရာတော်၏ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ပုံများကို အထူးဇောင်းပေးသော သတင်းစာကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။
…ဒီတိုင်းပြည် သူတစ်ပါးလက်အောက်ခံ ကျွန်နိုင်ငံဖြစ်နေရင် ဒီတိုင်းပြည်က လူမျိုးဟာလည်း ကျွန်လူမျိုး၊ ဒီလူမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကလည်း ကျွန်ဘာသာ၊ ကျွန်သာသနာဖြစ်မယ်၊ ဒါကြောင့် ကျွန်ဘာသာ၊ ကျွန်သာသနာ အဖြစ်က လွတ်အောင် သံဃာတော်များကျောင်းတွင် ကျိန်း၊ အိပ် မနေပဲ သံဃာ့သမဂ္ဂ များ ဖွဲ့ပြီး ဒီတိုင်းပြည် ဒီလူမျိုး လွတ်လပ်အောင် ဆောင်ရွက်သင့်ကြတယ်…. ဟု နှိုးဆော်ဟောကြားခဲ့သည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ အမြင်ကျယ်ပြန့်မှုနှင့် ညဏ်ကြီးမှုကြောင့် ၁၉၂၀ ဇူလိုင်လ တွင် သံဃာသမဂ္ဂ အဖွဲ့ပေါင်း ၃၀ ကျော်မှကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၁၂ တွင် ဦးဥတ္တမသည် ဂျပန်ပြည်သို့ ပေးပို့သော စာသုံးစောင်အနက် မေ ၂၁ ရက် နေ့စွဲပါ စာတစ်စောင်တွင်…. ဂျပန်ကျွန်းတွင် မိန်းကလေးဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားလေးဖြစ်စေ ၆ နှစ်စေ့၍ Primary School (မူလတန်းစာသင်ကျောင်း) မှာ သင်လျှင် ထိုလူကလေး၊ မိန်းကလေးတို့သည် ညကို ၁၀ နာရီ အိပ်၍ မနက် ၅ နာရီကို အိပ်ယာထရမည်..ဟူ၍ အစိုးရမင်းများကပင် ဥပဒေ ပြု၍ထားသည်။ ဦးဠင်းတို့ မြန်မာလူမျိုးတို့ကား အအိပ်၊ အနေ၊ အစား၊ အသောက်အနေအထိုင် အစစအရာရာ တို့တွင် စည်းကမ်းနည်းလမ်း မရှိသည့် အတွက်ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းမူလဖြစ်ဟန်ရှိကြောင်း… မြန်မာလူမျိုးတို့ကို ကမ္ဘာ့အမြင်ကျယ်စေရန် မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
ဦးဥတ္တမသည် သူ၏ ဂျပန်ပြည်အကြောင်း စာအုပ်တွင် … ငါတို့နိုင်ငံ၊ ငါတို့ မြန်မာလူမျိုးကြီးပွားမှသာလျှင် ငါတို့ ကိုးကွယ်သော ရှင်တော်ဘုရား၏ သာသနာတော်သည်လည်း ကြီးပွားကျော်ဇော၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပေါ်လွင် ထွန်းတောက်လာလိမ့်မည်ဟု အထင်ရှိ၍၊ ဂျပန်လူမျိူးတို့၏ လုံးလ၊ ၀ိရိယ၊ စည်းကမ်း၊ နည်းလမ်း၊ ထုံးစံဘာသာ အယူဝါဒ၊ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အသွားအလာ၊ အပြောအဆို၊ ယဉ်ကျေးခြင်းတို့ကို နည်းခံရအောင် အကြံဖြင့် ၁၉၀၇ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ကျွန်းကြီးသို့ သွားကြောင်း … ဖော်ပြထားသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ကမ္ဘာ့အမြင်ကျယ်မှုသည် ဗုဒ္ဒသာသနာထွန်းပြောင်ရေးကို သာမက မြန်မာ အမျိုးသားလုံး အတွက် နိုင်ငံရေး အသိညဏ်နိုးကြားမှုကိုပါ ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၂၀၀၇နှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာ့ လှုပ်ရှားမှု ကို ဦးဆောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု၏ ဦးဆောင် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သော အရှင်ဦးက္ကုသာရိယက ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ၏ မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံး အပေါ်ထား တဲ့ မေတ္တာ၊ စေတနာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အလွန်လေးစားလောက်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့စစ်အာဏာရှင် လက်အောက် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေချိန်မှာ ဆရာတော်ဟာ နိုင်ငံတကာ လှည့်လည်ပြီး သူရရှိလာတဲ့ အသိတရားတွေကို လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရဲရဲဝင့်ဝင့် တင်ပြပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်
မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး နိုင်ငံရေး အသိတရားနိုးကြားလာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဦးဥတ္တမ နိုင်ငံရေးမျိုးစေ့ချပေးခဲ့သော အဟုန်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသပိတ်စတင်မှောက်ကြသည်။ ထိုသို့ မြန်မာပြည်သူများ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသော်လည်း မိမိတို့၏ ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟ ထုတ်ပြခြင်းမပြုဝံ့ဖြစ်နေချိန်တွင် ဆရာတော်က ဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက်ထံ စာတစ်စောင်ရေးပို့လိုက်ကြသည်။ ထိုစာမှာ….. ဆာရယ်ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်း- မြန်မာပြည်က ထွက်သွား.. (Craddock , Get out ) ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ နှင်စာကို သူရိယသတင်းစာက ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ရာ တစ်တိုင်းပြည်လုံး မျက်လုံးပြူးအံ့အားသင့်ခဲ့ကြရသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ သတင်းသုံးခဲ့သော ဂျပန်နိုင်ငံ နဂိုယာမြို့ရှိ အိမ်ကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဟန်းတော်များအဖွဲ့ချုပ်၏ အတွင်းရေးမှုး ဆရာတော် ဖြစ်သော အရှင်သောပါက ဦးဇင်းအနေနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီပြတိုက်အိမ်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခိုက်မှာ.. ဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက် ထွက်သွား (Craddock Get out) ဆိုတဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အသံကြီးကို ပြန်ကြားယောင မိတယ်။ဒီတစ်မျိုးသားလုံး ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့ ဘုရင်ခံချုပ်ကို မောင်းထုတ်ရဲတဲ့ ဆရာတော်ရဲ့ ရဲရင့်ြုပတ်သားလှ တဲ့ မိန့်ကြားသံဟာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် ငုပ်လျှိုးနေတဲ့စိတ်ကို နိုးထစေခဲ့သည်။ အကြောက်တရားဆိုတဲ့ အမှောင်ထုကြားမှာ မကြောက်တရား ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်ကို ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့တယ် …ဟု မိန့်ပါသည်။ ဤစာကြောင့် မြန်မာလူမျိုးများအတွင်းတွင် မီးခဲပြာဖုံးဖြစ်နေသည့် လွတ်လပ်ရေးစိတ်၊ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ကို တပ်လှန်နှိုးဆော်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသလို ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်လည်း တတ်ကြွ လာသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ၁၉၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံခရိုင် ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆူးကလပ် ကျေးတရွာတွင် လိပ်အခွံခွာ ရမည်… ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားဟောပြောမှုကြောင့် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် အစိုးရအကြည်ညိုပျက်အောင် တရားဟောသည်ဟုဆိုကာရာဇသတ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) အရ ကျောင်းကုန်း မြို့နယ်တွင် ဖမ်းခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးဖြင့် ပထမဆုံး အပြစ်ပေး ခံရသောသူ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ နိုင်ငံရေး မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မြို့လုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးခေါ်၍ အစိုးရလုပ်တာမကောင်းလျှင် မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ဒီအခွင့်အရေးဟာ ငါတို့မှာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ငုံ့မခံနဲ့… စသော အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတရား ကို ဟောပါတော့သည်။
ဤသို့ဟောပြောပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာပင် ဆရာတောကို အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြီး အကြည်ညိုပျက်ပြားအောင် လှုံ့ဆော်သည်ဟုဆိုကာ ရန်ကုန်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဆရာတော်သည် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ဒုတိယအကြိမ် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရရှာသည်။
ဦးဥတ္တမသည် ၁၉၂၇ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၃နှစ်အကျဉ်းကျခံဘ၀မှ လွတ်မြောက်လာပြီးမတ်လ ၂၀ တွင် ပဲခူးမြို့တွင် ကျင်းပသော သံဃာတော်များသြ၀ါဒခံ ဦးစိုးသ်ိမ်းကြီးမှုးသော မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး(ဂျီစီဘီအေ)၏ ၁၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသို့ တတ်ရောက်ပြီးသင်္ကန်းရုံကိုလှပ်ပြီးလျှင် ထောင်ဝတ်ထောင်စားဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဦးစိုးသိမ်းက ပရိသတ်များမြင်ရဲ့လား.. မျက်ရည်ကျရုံနှင့် အိမ်ပြန်သွားရော့လား။အများကြီးအရေးကြီးသည်။ ယခု မျက်ရည်ကျခြင်းဟာ အမျိုးသားရေးအတွက် မျက်ရည်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ သာသနာတော်ကြောင့် မျက်ရည် ကျ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုသောသင်္ကန်းကို ချွတ်၍ အာဏာတန်ခိုးဖြင့် ဦးဥတ္တမကို ညှင်းပမ်း နှိပ်စက် သည်။ ယနေ့ ယခု အချိန်ကစ၍ မိမိအသက်ကို မငဲ့ဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည်….. ဟု ငို၍ပြောလေသည်ဟု စစ်ကိုင်းဟန်တင်၏ မြန်မာနိုင်ငံတော်မှတ်တမ်း ၃ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆရာတော်ဦးက္ကုဿရိယက ဆရာတော ဦးဥတ္တမဟာ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာကို သူရရှိထားတဲ့ လောကအမြင်၊ ခေတ်အမြင်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အကျိုးကိုရှေးရှုပြီး လမ်းညွှန် ဖော်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ အမြင်ကျယ်ရမယ်။ တာဝန်ယူရဲရမယ်။ ခေတ်ကာလကို လွှမ်းခြုံမြင်ရမယ်၊ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အစွဲတွေကို ဖယ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားအပေါ် အမြင်တွေ ကျယ်စေဖို့၊ အသိတရားတွေ ကြွယ်စေဖို့လုပ်နိုင်ရမယ်။ ယခုဆို သာသနာဟာ စစ်အာဏာ စက်အောက်ရောက်နေပြီ။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဒရဲ့ဓမ္မစက်အောက်ပြန်ရောက်ဖို့ ဦးဥတ္တမကို ရဲဝင့်ပြီး အမြင်ကျယ်တဲ့ သံဃာတော်တွေ အများကြီး လိုအပ်ဖို့ မိန်းကြားပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ အဓ္ဒမှုကို ရဲရဲဝင့်ဝင့်တော်လှန်ပြီး အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ လူမျိုးတို့အတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးဇူးရှင် အာဇာနည်ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအား နောင်လာနောင်သားအားလုံး အမြဲတစေ သတိရ အားကျဂုဏ်ယူကျစေရန်အတွက် စစ်တွေမြို့ရှိ အမှုထမ်းပေါင်းစုံ သမဂ အဖွဲ့မှ ဦးစီးကာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်အားဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနာတစ်ရပ်ကို ပလိပ်သမဂ အဆောက်အဦးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ရောက်တိုင်း ဦးဥတ္တမ နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် အနစ်နာခံပြီး နိုင်ငံရေး အသိအမြင်နိုးကြားလာအောင် ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့သော ကျေးဇူးကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ကြည်ညိုသူများက ကျင်းပကြသည်။
ဘလော့ခ်ဂါ ဒီမိုဝေယံ၊ အလင်းဆက် နှင့် ခမိခဆဲ
၉ . ၈ . ၂၀၀၉
Posted by အလင်းဆက် at 2:01 PM